Dr. Tint Swe's Writings: Chicken eggs and Cholesterol ကြက်ဥနဲ့ (ကိုလက်စထော)
Chicken eggs and Cholesterol ကြက်ဥနဲ့ (ကိုလက်စထော)
အလွန်ကြိုက်တဲ့ နို့နဲ့ ကြက်ဥ ဖြတ်ပါတော့မယ် ဆရာ။
ကြက်ဥထဲမှာ (ကိုလက်စထော) များတယ်။ ဒါပေမဲ့ စားတာထဲမှာ (ကိုလက်စထော) ဘယ်လောက်များမှ ကျန်းမာရေးအတွက် သတိထားရမလဲဆိုတာ တယောက်နဲ့တယောက် မတူပါ။ ကြက်ဥစားလို့ သွေးထဲမှာ (ကိုလက်စထော) တက်လာတာဟာ Trans fats (ထရန့်စ်) အဆီနဲ့ Saturated fats ပြည့်ဝဆီတွေလောက် မများပါ။
နှလုံးရောဂါနဲ့ဆပ်စပ်နေတဲ့ အစားအစာဆိုတာ အမေရိကန်မနက်စာဖြစ်တယ်။ ကြက်ဥပါမယ်၊ ဝက်ပေါင်ခြောက် (ဘေကွန်) ပါမယ်၊ ဝက်အူတောင့်ပါမယ်။ အဲတာတွေထဲမှာ (ဆိုဒီယမ်) ဆားလဲများတယ်။ တပါတ်မှာ ကြက်ဥ ၇ လုံး စားတဲ့သူတွေမှာ နှလုံးရောဂါပိုမဖြစ်ဘူးလို့ ဆန်းစစ်မှုတခုကဆိုပါတယ်။ အလွန်အကျွံသုတေသနတခုက ကြက်ဥစားရင် (ဆထုပ်ခ်) ဖြစ်တာတောင် နည်းသေးတယ်လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သဘောမတူချင်ပါ။ ဦးနှောက်သွေးကြာ မတော်တဆဖြစ်မှုဆိုတာ အစားအသောက်တခုတည်းကြောင့်ဖြစ်ရတာ မဟုတ်ပါ။
အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနအဆိုအရ ကြက်ဥအကြီးစားတလုံးမှာ (ကိုလက်စထော) 186 mg ပါတယ်။ Yolk အဝါနှစ်ထဲမှာသာပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကောင်းနေသူ (ဆေးစစ်ထားလို့ ကိုလက်စထော၊ နှလုံးရောဂါနဲ့ ဆီးချိုမရှိသူ) ဆိုရင် တနေ့မှာ (ကိုလက်စထော) 300 mg ထက်မများသင့်ပါ။ ကြက်ဥကြိုက်သူဆိုရင် အဖြူကိုသာစားပါ။
ကြက်ဥများတာ ဆီးချိုရောဂါပါ တွဲနေသူဆိုရင်တော့ (ဆောရီး) ဖြစ်ပါမယ်။ နှလုံး-သွေးကြောရောဂါခံရှိသူ၊ ဆီးချိုရှိသူ၊ မကောင်းတဲ့ LDL (ကိုလက်စထော) များနေသူဆိုရင် (ကိုလက်စထော) 200 mg ထက်မများစေပါနဲ့။ နောက်ပြီး ကြက်ဥကနေရတဲ့ (ကိုလက်စထော) ကိုသာမက တခြားစားသောက်တာတွေထဲက ရတာကိုပါ ထည့်တွက်ပါ။ ကြက်ဥတွေအများကြီးစားရင် သွေးထဲမှာ (ကိုလက်စထော) တက်မယ်။ ဒါပေမဲ့ Egg yolks အဝါရောင်ကို တပါတ်မှာ ၄ လုံးထက်မပိုရင် နှလုံးရောဂါအတွက် မစိုးရိမ်ရပါ။
1. Chicken eggs and Cholesterol ကြက်ဥနဲ့ (ကိုလက်စထော) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/chicken-eggs.html
2. Cholesterol and food ကိုလက်စထောနဲ့ အစားအစာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/cholesterol-and-food.html
3. Cholesterol and food ကိုလက်စထောနဲ့ အစားအစာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/cholesterol-and-food.html
4. Cholesterol ကိုလက်စထော http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cholesterol.html
5. Cooking Oils စားသုံးဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cooking-oils.html
6. Eggs ကြက်ဥ အစရှာခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/eggs.html
7. High Cholesterol diet (ကိုလက်စထော) များလို့ မစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/high-cholesterol-diet.html
8. Saturated Fatty Acids and Health risks ဆီ၊ အဆီနဲ့ ကျန်းမာရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/saturated-fatty-acids-and-health-risks.html
9. Trans Fats အညာသားများ ဆီစားကြသည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/trans-fats.html
10. Trans Fats အညာသားများဆီစားကြသည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cooking-oils.html